Ogaden News Agency (ONA) – Waraysi uu la yeeshay Radiyowga SEIFE NEBELBA Mudane Xassan Macallin.
Waraysi uu la yeeshay Radiyowga SEIFE NEBELBA Mudane Xassan Macallin.
Posted by ONA Admin	/ June 20, 2013
Idaacada SEIFE NEBELBA oo ah idaacad ay leeyihiin mucaaradka Oromada oo ku hadasha afka Amxaariga saldhigeeduna yahay Maraykanka ayaa waraysi dheer oo meela badan taabanaya la yeelatay Mudane Xassan Macallin.Waraysiga ayaa arimaha lagaga hadlay waxaa ka mid ahaa wabiga niil, Awooda ururka ONLF, Qaska siyaasdadeed ee ka taagan Addis iyo khilaafka Wayaanaha dhexdiisa, wuxuuna u dhacay sidan;
Suaasha ugu horeeyseey ee wariyuhu Seife Nebelba ku bilaabay baa ahayd arinta wabiga Niil iyo mawqifka ay ka taagantahay JWXO ama sida ay u aragto.
Wuxuuna uga jawaabay mudane Xassan in arinta wabiga ay tahay xaalad hadda uun waqti dhow aloosantay sidaa daraareed uusan hadda ka hadlayn arintaas maadaama ay u baahantahay qiimayn iyo in dhinacyo badan laga eego oo xaqiiqda la baadho markaa arintan dib ayaan u eegaynaa ka hadalkeeda.
Wariyaha – Seife Nebelba ayaa sheegay in awooda ururka ONLF ay aad u xoog badnayd beesha caalamkuna ay u qirsanaayeen laakiin hadda ay hadalhayntii awooda ciidanku yaraatay maxaa is badalay, miyaad yarayseen dhaq-dhaqiini ciidan?
Mudane Xassan ayaa arintaa ku tilmaamay borobogaandhada wayaanaha oo wax awoodayada iska dhimayna aysan jirin. Xagga midnimada ururka waligeen waxaan ahayn hal urur walina halkii urur baan nahay, sida aad la socotaan waxa jirtey 2010kii inay dawladda wayaanaha Germanka ka keentay shaqsiyaad ay soo abaabuleen iyagu ooy dhaheen waxeey qaateen nabadda laakiin shaqsiyaadkaasi wax isbadalla meeysan keeniin markii danbene inta la xidhi gaadhay ayey naftooda lasoo carareen ooy dib ugu soo noqdeen Jermalka. Markii labaadna sanadkii hore ayaa waxa jirey shaqsi ka mid ahaa markaa masuuliyinta noo jeegay Nayrobi oon ka mid ahayn gudigii wadahadlaka kuna jirin G/Dhexe inuu is dhiibay oo uu cadowga u galay deedna loo badalay inaan kala jabnay oo garab tagay uu jiro. Arintana waa dacaayad raqiisa oo uu soo walaaqo Wayaanuhu. Anagu waxaan ku dhisanahay awooda shacabkayaga iyo taageerada shacabka iyagaana na garabtaagan cid naga adkaan kartaana majirto. Xag ciidan iyo siyaasadba maanta waxaan joogna meeshii ugu awooda badnayd dacaayada Wayaanaha waa khiyaali ay iska dhaadhiciyeeen iyagu, hadda waxa u danbeeyeey darraad oo ciidmada JWXO ay 2 oraal oo Wayaana ah ay daqiiqamaha ka dhigeen waxa kale oo hadda aan xidhnay jidka isku xidha Harar iyo Jigjiga.
Seife NEBELBA: Waxaad sheegtay in 2 oraal aad gubteen xaguu ka dhacay weerarkani?
Mudane Xassan: Wuxuu weerarkan ka dhacay inta u dhaxaysa Qabridahare iyo Dhagaxbuur, laakiin sida la ogyahay ciidamada Wayaanuhu si xor ah uguma dhaqdhaqaaqaan Ogadenya hadeey baxayaana waa iney ku baxaan kaanbooy laakiin majiro hal gaadhi ah oo kaligii taayirka rogi kara. Marka xaalada dagaal oo adag ayaan ku jirnaa. Wayaanuhu shacabka masaakiinta ah ayuu kaa aargutaa oo makala sooco yar iyo weyn rag iyo dumar. Hayadaha xuquuqul insaankuna weey ogyihiin. Darraad xataa Genocide Watch waxey gaadhsiisay xasuuqa Ogadenya darajada 8 aad.
Seife Nebelba: Waxaad ii sheegtay in aad tihiin awood jirta aadna aad u xoog badantihiin laakiin wali ujeedadiinu ma cadda ka urur ahaan maxaad rabtaan manoo cadayn kartaa ujeedada ururka ONLF?
Mudane Xassan: Suaasha inaad i weydiiso kaama aqbalayo waayo ujeedada ONLF aad beey u cadahay xeerkayagana weey ku qorantahay shakina kuma jiro waxaana weeye in shacabkayaga laga qaado afti ay masiirkooda ku go`aansadaan ugu danbaynna la ixtiraamo ikhtiyaarka shacabka hadey go`aansadaan iney ka mid noqdaan Ethiopia iyaga leh ikhtiyaarka dadkayaga illaa 1954kii sidii uu Ingriis ugu wareejiyay Ethiopia cidina ma weydiin masiirkooda aaya ka tashi. Anaguna waxaan nahay jabhad ka dhexdhalatay shacabkooda kuna socota doonista shacabkooga, xaqqa aaya ka tashigana waa wax ku qeexan xeerka UNta oola qoray 1948 oo dhigaya xaqqa shucuubta oo ah in ummad kasta ay xaq u leedahay iney aayaheeda ka tashato iyadoo madax bannaan. Anaguna waxaan rabnaa in ikhtiyaarka shacabka la tixgaliyo dagaalka Ogadenya oo ah mid dhamman saameeyay Geeska Afrika, waana muhiim in xal laga gaadho maadaama uu Afrika oo dhan saamayn ku leeyahay, hadii xal siyaasi ah loo helo waa sax hadii kale waa dagaal.
Seife Nebelba/xaaladda ay ku sugantahay siyaasadda wayaanuhu maanta?
Mudane Xasan: Waxaa muuqata in ay maanta iyaga dhexdooda ay ka socoto oo ay is khaarijinayaan iyagoo isugu marmarsoonaya musuqmaasuq iyo xadhig cimrigooduna ma dheera waxaanuna u aragnaa in ay tahay Itoobiya maanta banbo qarxaysa xilli aan la garanayn ma bil ama 2 bilood ama sanad xilli ay qaadataba weey iskuqarxi awood dhexene majirto, nin walba meeshuu joogno isagaa ka madaxweyne ah cidkalena kama amarqaato. Midka Harar fadhiya isagaa isu Taliya, ka Oromokan Gambelle mid waliba isagaa isu haya talada maadaama uu ciidan haysto. Heilemariam na ma heysto wax awooda waa bilaa awood wadanka waxa xukuma TPLF iyagaana u taliya taladana qaybsaday.
Halkan ka dhagayso:
Waxaa noo tarjumay Baarqab
Xafiiska Tarjumaada ONA